दाँतको किरालाई मार्न र दुखाइ कम गर्नका लागी अपनाउनुस् यी ४ घरेलु उपाय – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/दाँतको किरालाई मार्न र दुखाइ कम गर्नका लागी अपनाउनुस् यी ४ घरेलु उपाय
काठमाडौँ । नियमित ब्रस नगर्दा दाँतको बीचमा आफूले खाएका अन्नका कणहरु बस्दछन्, जब यी कणहरु सड्न थाल्छन्, तब दाँतमा किरा लाग्न थाल्छ । किरा लागेपछि दुखाई त महशुस हुन्छ नै दाँतको जरा पनि कमजोर बन्दै जान्छ । अन्ततोगत्वा हामी हाम्रो दाँत नै गुमाउने अवस्थामा पुग्छौँ ।
दाँतको दुखाई एकदमै पीडादायक हुन्छ । यदि तपाईंको दाँतमा पनि किरा लागेको छ वा अत्याधिक दुखाई महशुस हुन्छ भने यी घरेलु उपायहरु अपनाएर त्यसबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ ।१. पिसेको धुलो बेसार र नुनलाई तोरीको तेलमा मिलाउनुस् । मञ्जनजस्तै हिलो बनेको यो मिश्रणले दैनिक दुई(तीन पटक दाँतको मालिस गर्दा वा यसले ब्रस गर्दा दाँतको किरा मर्दछ ।
२. किराले खाएर खोक्रो बनेको भागमा रुवो ९कपास०लाई ल्वाङको तेलमा भिजाएर राख्नुस् । यसो गर्दा दाँतमा लागेको किरा मर्दछ ।३. तातो पानीमा फिटकिरी घोलेर बिहान-बेलुकै मुख कुल्ला गर्दा दाँतको किरा मर्नुका साथै गन्ध पनि हराएर जान्छ ।४. किरा लागेको दाँतमा बरको चोप लागउँदा किरा मर्नुका साथै दुखाई पनि कम हुन्छ ।
एउटा यस्तो ठाउँ जहाँ भाडामै पाइन्छन् ब्वाईफ्रेन्ड !
जब सुपरमार्केटमा बिल तिर्न नसकी रुन लागेकी एक महिलालाई क्याशियरले सुटुक्क भने यी ३ शब्द
भगवानका प्रिय व्यक्तिको हातमा मात्रै हुन्छ यी अक्षर, हरेक क्षेत्रबाट पाउछन् सफलता नै सफलता